Otu esi ere ulo di iche iche - achọtara nke oma
Brenda Thompson - Onye Ọkachamara Ọkachamara nke Ụlọ Ahịa na Onye Na-ere Ebi ala
Ndị ọkachamara n'ọchịchị
Kedu ihe onwunwe a pụrụ iche?
Na-ere ụlọ gị
Ọrụ Ntugharị Ụlọ Ahịa
Ndị Ọrụ & Ndị nwe ụlọ depụta Ụlọ Gị Pụrụ Iche!
Njirimara Akara Maka Sale
Ụlọ Mbibi na Ụlọ Egwu
Ezigbo ụlọ na ebe obibi
Ezigbo Oge Ayi / Eclectic Homes
Ezigbo Ụlọ Mmiri Waterfront
Ezigbo Njirimara Njirimara
Ụlọ ndị ọzọ pụrụ iche
Otu esi ere ulo di iche
Home » Otu esi ere ulo di iche
Ihe February 13, 2018
In Ịzụta Ụlọ Nanị
Otu esi ere ulo di iche2018-02-132018-02-15https://specialfinds.com/wp-content/uploads/2016/07/SpecialFindsLogo-1.pngAchọpụtara nke ọmahttps://specialfinds.com/wp-content/uploads/2016/08/Nostalgia-Cottage.jpg200px200px
Ọ bụrụ na ị nweela ihe onwunwe pụrụ iche, ma ọ bụ ụlọ ọhụrụ, ị ghọtara nchegbu ndị ị na-ere. Ị mara nke ahụ, ọ bụ ezie na onye ọ bụla gara nleta gị hụrụ ya n'anya, ha nwere ike ọ gaghị enwe obi ike ịzụta ya. Ya mere, olee otu ị si ere ihe onwunwe pụrụ iche? Kedu ka ị na-adọta onye zụrụ ihe pụrụ iche maka ụlọ pụrụ iche?
Ọ na-abịa n'ụzọ ị na-akpọsa!
Ụlọ ndị na-adịghị mma na-arịọ ndị na-azụ ahịa dị iche iche. E nwere ndị na-azụ ahịa n'ebe ahụ, na-achọ ihe dị iche iche, ihe dị iche iche - ihe onwunwe pụrụ iche.
Mụ, mụ onwe m, dabara n'àgwà ahụ. Apụghị m ịkọwa ihe onwunwe m na-achọ, n'ihi na ahụghị m ya. M maara na achọghị m ka ụlọ kuki kuki.
Mgbe m zụrụ ụlọ mbụ m, ụlọ mbata nkume, nke na-ele Osimiri Hudson dị na NY, achọpụtara m na ọ ga-adị ndị ọzọ na-azụ m dị ka m. Ọ bụ ya mere m ji malite Pụrụ Iche "Chọta ...", bụ ebe anyị na-ere naanị ihe dị iche iche.
Ndị na-ere ihe dị iche iche dị iche iche dị iche na ndị na-azụ ahịa ọzọ, n'ihi na ha na-azụta ihe dị n'echiche ahụ, ha na-elekwasị anya na "eziokwu" mgbe emesịrị - mgbe ha jikọtara mmetụta uche na ihe onwunwe ahụ. Ya mere, gị n'ụlọnga kwesịrị ịkpọsa banyere ihe ndị nwe ụlọ nwere ihe pụrụ iche ga-emetụta.
Nke a bụ ihe atụ nke mgbasa ozi m dere site na otu n'ime edemede m gara aga:
Ihe mgbasa ozi na-akọ akụkọ ihe mere eme nke a echefuola "Nchọta ...". Ihe onwunwe a pụrụ iche nwere ọtụtụ rịọ ma rere ya n'ime ụbọchị 3.
Ọnụ ụzọ mbata na-ama ụra dị ka nwatakịrị na-atụgharị n'otu ọnụ ụzọ wee pụta ọzọ. Ebere na-azaghachi n'ime ụlọ ahụ ka ụmụaka na-akpọ hide-'n-search on lawn. Ugwu na-egbuke egbuke nke tii na nkume n'elu oghere nke ihe nkedo. Nkume gingham na-agbazi tebụl picnic ebe mbadamba mmiri na achịcha na-eme ka ndị na-agafe agafe. Nostalgia Cottage abughi ebe ndi mmadu na ndi obodo gbakotara kwa afo maka oge di iche iche. Ụlọ nke Tanner maara nke ọma na-ewu na 1908, ọ na-ala azụ site n'okporo ụzọ dịka 3 acres. Na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha, na ọhụrụ ụlọ na nnukwu ihe mmelite, ọ na-ọma na ya ụzọ imeghari ohuru. Mgbidi ya siri ike na-ejigide akụkọ ịhụnanya, ịhụnanya, na mpako, doro anya na nkọwa nke ụfọdụ n'ime ihe ndị mbụ ahụ ka fọdụrụ - a na-egbutu osisi oak nke osisi n'elu ala Tanner, akpa mkpụbe ma na-arụ ọrụ ụlọ, na-agbanye ihe mgbakwasị ụkwụ 11, 4 na-esecha ụlọ ọnụ ụlọ na 2 ime ụlọ ịwụ ahụ. Kichin bụ ihe mbụ na-achọ nkwụgharịcha mma zuru okè, ma ohere dị ukwuu na ụlọ nri ụtụtụ dị iche iche. Ihe onwunwe a bụ ihe dị ọcha na-echere na-eje ije n'ebe dị anya iji zụọ ahịa, iri nri na ụlọ ọgwụ. N'iji mita 2800, ọ ga-eme B & B dị ebube.
Gwa onye na-elekọta gị ka ị kọwaa ihe onwunwe gị "nke mmetụta uche," ka onye na-azụ ihe nwee ike ịchọta "akụkọ ihe mere eme" nke ihe onwunwe, ma ọ bụ otu esi ebi na ụlọ gị, na n'ụlọ gị, site n'ebe ọ bụla ha nọ, ka ha na-agụ ihe onwunwe gị.
Nke ahụ bụ ihe anyị na-eme, na Special "Chọta ...". Ma ọ na-arụ ọrụ!
Maka echiche ndị ọzọ iji nyere gị aka ire ụlọ gị pụrụ iche, gụọ m post: Otua esi efu ulo
Ịzụta Njirimara Ugwu Na-adịghị
Inwe ulo nke puru iche - azu ahia
Ịhọrọ Ụsọ Osimiri Na-edozi Ido
Ịzụta Ụlọ Metaphysical | Ịzụta Ụlọ Ndị Dị Iche Iche
Otua esi efu ulo
[...] Maka echiche ndị ọzọ iji nyere gị aka ire ihe onwunwe gị pụrụ iche, gụọ m post: "Atụmatụ ịzụta Ihe Njirimara Pụrụ Iche" [...]
Mee 6th, 2013 10: 02 AM
Zọpụta aha m, email, na ebe nrụọrụ weebụ na ihe nchọgharị a maka oge ọzọ m ga-aza.
Kwee Ahịa Ahịa Gị Pụrụ Iche
Gbanwee onyinyo ihe onwunwe gị - Ka enyemaka enyemaka "Pụrụ ..." nyere. Anyị ga-ama ụlọ gị - dee banyere ya site na iji okwu ndị ga-egosipụta àgwà ya pụrụ iche. Mgbe ahụ, anyị ga - azụlite "Akụkọ Ngwongwo" na ịzụ ahịa ahịa iji mee ka ị chọpụta na ịchọta onye zụrụ ahịa zuru ezu na-achọ ụlọ dịka gị.
Nye anyị oku iji malite na njem pụrụ iche ịchọrọ "Finds ..." ®:
Otua esi esi ahia ulo | Ịkwụ Ụgwọ Ụlọ
Atụmatụ ọkachamara nke ahịa ahịa
Mee ka nchọpụta maka "Nchọta ..." gị pụrụ iche.
Ikike niile echekwabara © 2016
Malite dee na pịa Tinye ka ịchọọ
Otu esi ere uloỊzụta Ụlọ Nanị
Mkpuchi ikpe - Ịchọta Ụlọ dị njikere ịzụtaỊzụta Ụlọ Nanị